ကျောက်နီမော်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အား ၆ နာရီအတွင်း ရခိုင်အကြမ်းဖက်များ ၃ ကြိမ်တိုက်ခိုက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« After Ethnic Cleansing there could beadawn of hope for Rohingyas
Rakhines Still Trying to Attack Kyaut Ni Maw (at 2:30PM on 30.10.2012) »
“(၇)နာရီလောက်ကတည်းက ကျောက်နီမော် အနောက်ဘက် ကျောက်ထရံရွာမှာ လူစုတယ်၊ အင်အား (၃၀၀၀) ၀န်းကျင်ရှိတယ်၊ စစ်တပ်က ပစ်တယ်၊ ခလရ (၅၆၂)ဆိုရင် နံနက်အစောကြီးကတည်းက ရောက်လာပြီး အကာအကွယ်ပေးထားတယ်” ဟု ကျောက်နီမော်ရွာရှိ ကမန်တိုင်းရင်းတစ်ဦးက myanmarmuslim.net သို့ ပြောသည်။
“ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေထဲက ချောင်းဝရွာက ဟန်ထွန်းချေ ကို စစ်တပ်က သုတ်သင်လိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ နောက်အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်ကတော့ ပေါင်ကို ကျည်ထိတယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု တာဝန်သပြည်သူတစ်ဦးက myanmarmuslim.net သို့ ပြောသည်။
“မီးကွင်းပစ်တဲ့ ရာဇာနေ၀င်းနဲ့ ၀င်းဝင်းထွန်းတို့ရဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းတွေကို သိမ်းထားတယ်၊ အထောက်အထား အပြည့်အ၀ရှိတယ်” ဟု ကျောက်နီမော်ရှိ ကမန်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှာကိုက ALP က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံး ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်၊ တကယ်ပစ်တဲ့တပ်တွေဆိုရင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရုံးအမိန့်နဲ့ အကြောင်းရှာပြီး ပြောင်းမှာလေ၊ ခမရ ၃၄၆ နဲ့ ခလရ ၅၆၂ တို့လည်း ဒီလိုပဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ်၊ တပ်အင်အားကျမှ သူတို့က အလွယ်တကူဖျက်မှာ၊ အရင်အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်လို့လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး” ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
This entry was posted on October 30, 2012 at 9:50 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.